Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 | Androidsis
Haddii aad si sax ah u maqashay, casharradan cusub ee wax ku oolka ah waxaan ku baran doonnaa sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow, dabcan si aan rasmi ahayn ugana mahadceliyay bulshada weyn ee Android ee ka dambeysa qaybtan Samsung terminal.
Nidaamka aan raacayno waa si fudud rakibida a Rom la kariyey oo ku saleysan CM13 ama Cyanogenmod 13 taas oo ah wax aan ka badnayn nooca AOSP ee Android 6.0 Marshmallow, ama waxa isku mid ah, oo ah nooc gebi ahaanba nadiif ah ee Android 6,0 si kan yar eeyagu wali noo siinayo xoogaa dagaal ah oo aan u dhaafin in lagu iloobo asalka asalka khaanad Marka hadda waad ogtahay, haddii aad leedahay Samsung Galaxy S3 International Model GT I9300 Oo waxaad dooneysaa inaad waxbadan kahesho adoo cusbooneysiinaya Android 6.0, waxaan kugula talinayaa inaadan seegin qoraalkan halka aan ku sharaxi doono howsha rakibida bilow iyo talaabo talaabo.
1 Shuruudaha laga rabo in la buuxiyo si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
2 Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsaung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
2.1 Download faylasha lagama maarmaanka ah:
3 Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marsmallow talaabo talaabo ah
3.1 Tallaabada 1 dib u bilaw hab-kabashada
3.2 Tallaabada 2, biligleynaya Rom, Gapps iyo SuperSU:
Shuruudaha laga rabo in la buuxiyo si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
A Samsung Galaxy S3, moodel caalami ah GT-I9300 taas oo waliba ay tahay inay noqoto Xidid iyo haysashada Soo-kabashada la beddelay.
Hayso Dib-u-habeynta wax laga beddelay ayaa la cusbooneysiiyay qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo. Aad ayey muhiim u tahay inay ku jirto nooc ka mid ah TWRP 2.8.7 ama ka sareeya.
A gurmad, nandroid backup dhamaan nidaamka hada jira.
A kaabta EFS galka.
Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo a gurmad dhammaan barnaamijyada iyo xogta maadaama howsha cusbooneysiinta aan waayi doonno.
Dib-u-hagaajinta USB-ga ayaa la shaqeeyay laga soo bilaabo goobaha horumarinta.
Marka dhammaan shuruudahaas la buuxiyo, kuwa ugu muhiimsan shaki la'aan waa kuwa ka mid ah ha u cusbooneysiiyaan TWRP qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo, Nooc lagu taliyay in waxaad awoodi doontaa inaad kala soo baxdo isla xiriiriye, iyo sidoo kale nuqul nuqul ah ka sameyso galka 'EFS', markii la wada sameeyo, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad raacdo casharka ku lifaaqan si aad u hesho cusboonaysii Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow.
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsaung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
Si aad u cusbooneysiiso Samsung Galaxy S3 illaa Android 6.0 Marshmallow, Fadlan ogow in tani kaliya ay u shaqeyso qaabka caalamiga ah ee GT I9300, waxaan u baahanahay inaan kala soo baxno seddex feylood oo is dulfuulan oo qaab ZIP ah oo u dhigma zip-ka ROM-ka laftiisa, zip-ka codsiyada asalka ah ee Google, ee sida fiican loo yaqaan GAPPS, iyo ZIP-ka SuperSU 2.56 oo siin doona rukhsad SuperUsaurus Samsung Samsung S3.
Download faylasha lagama maarmaanka ah:
Dib-u-soo-kicinta Rom Remix M 6.0.1
Marka seddexda feylood ee lagama maarmaanka ah la soo dejiyo, ayaan nuqul ka sameysan doonnaa sida ay tahay, taasi waa iyada oo aan hoos loo dhigin, xusuusta gudaha ama dibedda ee Samsung Galaxy S3, si aad u noqon karto xididka isku midka ah, ama wixii isku mid noqda, si toos ah gudaha ama dibedda xusuusta laakiin iyadoon la gelin meel kasta oo galka ama galka ah.
Markaa waa inaan iska yeelnaa Raac tilmaamahan biligleynaya ee warqadda ah iyo adigoon ka boodin talaabo kasta.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marsmallow talaabo talaabo ah
para cusboonaysii Samsung Galaxy S3 ilaa android 6.0 Marshmallow oo aad nolol cusub u siiso taleefankaaga casriga ah, waa inaad raacdaa tallaabooyinkan fudud ama tilmaamaha ifaya:
Tallaabada 1 dib u bilaw hab-kabashada
JoojiKu bilow Samsung Galaxy S3 qaabka soo kabashada, taas oo ah, qaabka soo kabashada ama qaabka Soo-kabashada, waxaan u baahanahay inaan gebi ahaanba dami-weyno, sugno ilaa toban ilbiriqsi si aan u hubino inuu gebi ahaanba xirmay oo mar kale u daarto adoo riixaya badhamada markan. Mugga + Guriga awood badan ilaa aan helno astaanta bilowga, daqiiqadaas waxaan sii deyn doonaa badhanka Power laakiin waxaan riixeynaa oo qabaneynaa badhanka Volume + iyo Home.
Sawir sidan oo kale ah ayaa naloo muujin doonaa kaas oo aan ku qasbanaan doonno inaan raacno tillaabooyinka aan u sharraxayo tallaabo tallaabo hoose:
Tallaabada 2, biligleynaya Rom, Gapps iyo SuperSU:
Waxaan aadeynaa xulashada Tirtir oo aan dooranno Cabbirta saafiga ah gudahood doorashadan calaamadee dhammaan xulashooyinka suurtogalka ah marka laga reebo waddada aan ku kaydinay faylasha lagama maarmaanka u ah biligleynaya ROM-ka, taasi waa, haddii Rom-ka loo soo guuriyey xusuusta dibedda ama kaarka MicroSD ee dibadda ah, waxaan sameyn doonnaa dhammaan Wipes-yada suuragalka ah marka laga reebo Memory-ka Dibadda ama Memory-da Dibadda. Haddii, dhanka kale, aan ka soo guurineyno Rom-ka xusuusta gudaha, waxaan sameyn doonnaa dhammaan Wipes-ka marka laga reebo xusuusta gudaha ee aan soo sheegnay ama xusuusta gudaha ah, maadaama ay halkaas tahay meesha aan ku haysanno wax kasta oo aan ugu baahanno inaan ku rakibno ROM-ka.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib oo xulo Sifo ROM ah, kadib Dhammaan gifs Gapps ugu dambayntiina Dhamaan gifs SuperSU, had iyo jeer amarkan aan calaamadeeyay, ROM, GAPPS iyo SuperSU.
Waxaan ku dhajinaynaa iskuduwaha laga soo bilaabo salka TWRP si loo fuliyo howlaha la calaamadeeyay ee aan ka ahayn rakibaadda siibbada la xushay waxaan sugeynaa howsha inay si sax ah u dhammaato
Hadda waa inaan dooranaa ikhtiyaarka Dibudhiska Nidaamka Hadda oo sug Samsung Galaxy S3 inay dib u bilowdo si caadi ah oo ina tusaysa shaashadda soo dhaweynta ee nooca cusub ee Android 6.0 Marshmallow gWaad ku mahadsantahay asxaabta horumariyaha kooxda Ressurrection Remix
Hadda intaas uun baad heleysaa ku xir Samsung Galaxy S3 akoonadaada Google iyo codsiyada aad jeceshahay, haddii aad keydin laheyd dhamaan barnaamijyadaada iyo xogtaada adoo adeegsanaya Titanium Backup, kani waa daqiiqad lagu rakibo APK-ka Titanium Backup iyo samee dib u soo celinta dhammaan barnaamijyada iyo xogta la keydiyay iyada oo la tixgelinayo in codsiyada iyo xogta nidaamka ka muuqda casaanka, ay noqon doonaan kuwa ay tahay in aynaan dib u soo celin maaddaama ay sababi karaan waxyeello ama cillad nidaamka cusub ee lagu rakibay maaddaama ay yihiin xog ama barnaamijyo nidaamyo ka duwan nooc ka duwan Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
Paul Caro dijo
Francisco, LG G2 ma jiro wax macquul ah oo xasiloon oo loo maro Android M? Waan ogahay inaad qiimeynayso taleefankan iyo kan aan leeyahayna wali waxaa u haray dhawr bilood oo adeegsi ah.
Jawaab Pablo Caro
Waan fiiriyaa isla marka aan wax cusub helo waxaan la wadaagayaa dhammaantiin.
Waad salaaman tahay saaxiib sidee tahay Waxaa jira wax aan aniga igu habboonayn oo ah in miisaanka roomaantu uu yahay 276MB oo romka caadiga ahi miisaankiisu yahay 1.30GB, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sababta culayskiisu u yar yahay
Saaxiib, waan waalanahay X waxaan rabaa inaan u cusbooneysiiyo S3 I9300 xididkayga barnaamijka SuperSU laakiin ma aqaano sida loo helo dib u habeynta la cusboonaysiiyay waana la cusbooneysiiyaa. Ma aqaan sida loo sameeyo nuqulo nuqul ah sidoo kale. Ma i caawin kartaa? Ii qor yzeppenfeldt@gmail.com Gracias
Jawaab ku sii Yoendris
francisco, ee loogu talagalay s4 gt i9500 sidoo kale suurtagal ma noqon doontaa?
Nacho gonzalez dijo
Waad salaaman tihiin. Romku wuxuu ku socdaa fadeexad. Gapps-ka waa inaan halkaas ka raadsadaa, maadaama xiriirku hoos u dhacay. Supu sidoo kale internetka, waan helay, laakiin markii aan bilaabay mobilka waa la qabtay. Ka dib markii laga saaray dhibaatada, taas oo ahayd supersu, wax waliba waxay u shaqeeyeen sidii soo jiidasho. In kasta oo aan helay supersu kale, weli waxaannu ku jirnay isla kuwii hore, markaa waxaan rakibay Rom iyo Gapps-ka oo way fiicantahay. Waxa aan tijaabiyey waxay ku socdaan si ka weyn oo ka sarreeya 300 Mb. Ram oo bilaash ah. Taleefanka ayaa si habsami leh u socda - waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalka!
Jawaab Nacho González
Tani waa faallooyinka aan u baahday si aan u go'aansado inaan cusbooneysiiyo. Qof isku dayay oo sidaa dhaha. Iyada oo faallooyinkaas ka dibna aniga ayaa tagaya. Mahadsanid
Jawab Carlos Rafael Ramirez
Markii aan daarto, waxay ku dheggan tahay calaamadda "Qiyaamada Remix" weligeedna taleefanka ma furayo. Sideen ku xallin karaa?
Ku jawaab l10n3lmz
Kaliya loogu talagalay GTi9300? Ma shaqeyn lahayd mise waxay kaloo ahaan lahayd samsung s3 neo gt i9301i?
Ku jawaab euritaco
Waad salaaman tihiin. Xaqiiqdii xaqiiqdii kama aadan nadiifin keydka ama Dalvik cache kahor intaadan bilaabin Remix Remix markii ugu horeysay. Gali Soo-kabashada oo tirtir. Dib u bilaw mar labaad waana inaad bilowdaa dhibaato la'aan. isla waxbaa igu dhacay xalkuna wuxuu ahaa kan aan soo tilmaamay.
Kuwaas - aniga oo kale ah - oo leh Galaxy S4 oo doonaya inay rakibaan Marshmallow, waxaan kugula talinayaa Temasek ROM (oo ku saleysan CM 13). Waxay u socotaa si habsami leh kooxduna way duushaa. Dabcan, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad rakibto kernel Arter97 ah, haddii kale, nidaamku wuu xirnaan doonaa markuu bilaabayo taleefanka.
Ku jawaab Castor
Waxwalba waan ku sameeyay warqada waxayna kuxirantahay astaanta "remix remix".
Waxay igu dhacdaa si isku mid ah. Waxaan isku dayay inaan rakibo nooca ugu dambeeya ee ay ku leeyihiin shabakada waxayna qaadataa in ka badan 10 daqiiqo in astaanta aysan dhaafsiisnayn: /
saaxiib romka culeyskiisu waa 276 MB, miyaanay xumaan doonin? Kii iigu dambeeyay ee aan soo dejisto wuxuu ahaa xusuusta blekota 4 5.2 wuxuuna culeyskiisu ahaa 1.30GB
Miyuu la shaqeeyaa Samsung Galaxy S3 Neo (GT-I9301I)?
Shanta astaamood ee ugu caansan ee Android N
Soo qaado sawirada warshadda ee muuqaalka Android N ee Nexus 5X, 6, 6P, 9, Ciyaaryahan iyo Pixel C